Sengeziwe isikhathi sikashwele kamasipala | News24
Sengeziwe isikhathi sikashwele kamasipala
UMASIPALA uMsunduzi uthi unethemba lokuthi uzothola izimpendulo ezingcono kumalunga omphakathi awukweletayo njengoba umasipala usuhlehlise isikhathi sokuvalwa kokufakwa kwesicelo sikashwele saba umhla zingama-31 kuNhlaba (May) kuwona lonyaka.
Lokhu kuvele esithangamini sabezindaba ebesiseTourism Hub ngoLwesibili mhla zili-12 kaNhlolanja (February) nalapho kade kudingidwa khona izinkinga ezibheke nomasipala okubalwa khona nokuhlanzwa kwedolobha.
Imeya yoMasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo uveze ukuthi bathole izimpendulo eziyi-2000 kuphela kulezi zinyanga ezintathu ezedlule ekade kuvulwe ngazo isikhathi sikashwele.
Uthe njengoba sesengeziwe isikhathi sokuvalwa kukashwele banethemba lokuthi abantu bazophendula kangcono.
Ukufaka isicelo sikashwele kwavulwa ngokusemthethwini ngenyanga kaNcwaba (October) ngonyaka owedlule kanti bekulindele ukuthi sivalwe mhla zili-15 kuMasingana (January) kulonyaka kodwa loko kwagcina kungenzekanga.
Umasipala ukweletwa imali elinganiselwa ku-2 billion kanti leyomali ikweletwa abantu abahlala ngaphansi kwalomasipala kanti enye ikweletwa amabhizinisi.
Umasipala uthi ubulindile ukuthi ungahle uthole izimpendulo ezilinganiselwa ku-25 000 kodwa loko akwenzekanga.
Ibamba lemenenja kaMasipala uMsunduzi uNkk Neli Ngcobo uthe lo mkhankaso kashwele awukho mayelana nesamba semali kodwa umayela nokuthola amakhasimende kamasiapala.
“Sifuna ukwazi ukuthi mangaki amakhasimende kamasipala abhekene nobunzima bokuthi angakwazi ukukhokha, ukuze sizokwazi ukuthola labo abasintshontshela ugesi kanye namanzi bangakukhokheli,” kubeka yena.
Amakhasimende kamasipala akweletayo ayanxuswa ukuba afake izicelo zikashwele uma ngabe bebhekene nobunzima bokukhokha. Amalunga omphakathi akweletayo kuzomele bakhokhe uhhafu waleyo mali abayikweletayo bese bathole isaphulelo salona omunye uhhafu (50%) abawukweletayo.
“Lo mkhankaso kashwele awukho mayelana nesamba semali esizotholwa umasipala kodwa umayela nokuthola ukuthi mangaki amakhasimende akamasipala akweletayo ukuze kuzotholakala nalabo abantshontshayo abangafuni ukukhokhela ugesi kanye namanzi.”